Isixhobo esihle sokuSombulula iingxaki kwiKhowudi yokuKhangela yokuHlola kukaGoogle | Martech Zone
Isixhobo esihle sokuSombulula iingxaki kuKhangelo lokuKhangela kuGoogle
NgeCawa, Oktobha 19, 2014 NgeCawa, Oktobha 19, 2014 Douglas Karr
Oo, ezo smarties kuGoogle nazo zonke izixhobo zabo! Kwiveki ephelileyo, umthengi wayenemicimbi ethile yokulandela umkhondo kuGoogle, ezama ukwahlula iindwendwe ezazingene ngokuchasene nabo babengekho. Isiseko sokusombulula ingxaki yayikukuqinisekisa ukuba imicimbi elungileyo kunye nedatha zazidluliselwa kuGoogle. Ndambonisa indlela endinokuphazamisa ngayo usebenzisa i-Network tab kwi-Google Chrome Izixhobo zoPhuculo.
Olunye uphononongo lunamabala… ubuza ukuba ingaba iyayixhasa okanye ayixhasi Uhlalutyo lweNdalo iphela (iyatsho ukuba iyayenza). Asiphuculwanga kwi-Universal Analytics (okwangoku) kodwa kubonakala ngathi iyandisebenzela.
tags: uhlalutyo lokulungisa iphuthaUhlalutyo lweGoogle debuggerIkhowudi yokulandelela uhlalutyo kuGoogleUhlalutyo jikelele kuGoogleukusombulula ingxaki kuhlalutyo lukaGoogle